के हो मलमास ? पौराणिक कथा यस्तो छ – ज्योतिष केशव – Complete Nepali News Portal
के हो मलमास ? पौराणिक कथा यस्तो छ – ज्योतिष केशव
प्रत्येक राशि, नक्षत्र, करण, महिना आदिका स्वामी छन् । मास देवताका नामः— बैशाख – मधुसुदन/मोहिनी, जेठ – त्रिबिक्रम/पद्याक्षी, आषाढ – वामन/कमला, श्रावण – श्रीधर/कान्तिमती, भाद्र – हृषिकेश/अपराजिता, असोज – पद्यनाभ/ईषा, कार्तिक – दामोदर /राधा, मंसिर – केशव/बिशालाक्षी, पौष – नारायण/लक्ष्मी, माघ – माधव /रुक्मिणी, फाल्गुन – गोविन्द /धात्री, चैत्र – विष्णु/रमा
तर अधिक मास अर्थात् मलमासको स्वामी छैनन् । यसकारण अधिक मासमा सम्पूर्ण शुभ कार्य, देव कार्य एवं पितृ कार्य वर्जित मानिएको छ । यद्यपि, पुराणमा अधिक मास पुरुषोत्तम मास ब कसरी बन्न पुग्यो भन्ने रोचक कथा दिइएको छ ।